Ch 11 Matthew – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Matio / Ch 11 Matthew
11:1 Ary nony fa, rehefa vita Jesosy nampianatra ny mpianany roa ambin'ny folo lahy, dia niala teo mba hampianatra sy hitoriteny any an-tanànan'ny.
11:2 Ary rehefa ren'i Jaona, tany am-ponja, momba ny asa nataon'i Kristy, naniraka roa lahy tamin'ny mpianany, hoy izy taminy:,
11:3 "Hianao va Ilay ho avy, na tokony hanantena hafa?"
11:4 Ary Jesosy, mamaly, hoy izy taminy: "Mandehana ianareo, ka ambarao amin'i Jaona izao renareo sy hitanareo.
11:5 Mahiratra ny jamba, ny mandringa; diovina, ny boka, malady ny marenina, hitsangana ny maty, ny mahantra dia Evanjely tsy.
11:6 Ary sambatra izay tsy nahita heloka amiko. "
11:7 Avy eo, rehefa lasa, Jesosy niteny tamin'ny vahoaka momba an'i John: "Inona no nalehanareo tany an-tany efitra ho any mba hijery? Volotara nohozongozonin'ny rivotra?
11:8 Ka inona no nalehanareo tany hizaha? Ny lehilahy malemy fitafiana? Indro, ireo izay nitafy fitafiana malefaka ao an-tranon'ny mpanjaka.
11:9 Ary inona no nalehanareo tany hizaha? mpaminany? Eny, Teneniko anao, ary mihoatra noho ny mpaminany.
11:10 Fa izy, ny ilay voasoratra: 'Indro, Izaho maniraka ny Anjely eo alohanao ny tavanao, Izay hamboatra ny lalanao eo alohanao. '
11:11 Amen Lazaiko aminareo, Amin'izay nateraky ny vehivavy, misy no efa mitsangana tsy nisy lehibe noho i Jaona Mpanao Batisa. Nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia lehibe noho izy.
11:12 Fa hatramin'ny andron'i Jaona Mpanao-batisa, na dia mandraka ankehitriny, ny fanjakan'ny lanitra dia miaritra herisetra, ary ny mpandrombaka hitondra izany izy.
11:13 Fa ny mpaminany rehetra sy ny lalàna dia naminany, na dia hatramin'i Jaona.
11:14 Ary raha vonona ny hanaiky izany, Izy no ilay Elia, izay ho avy.
11:15 Na iza na iza manan-tsofina ho enti-mihaino, aoka izy hihaino.
11:16 Fa tahaka ny inona no hanoharako ity taranaka ity? Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena,
11:17 izay, miantso ny namany, milaza: 'Nilalao mozika ho anao, ary ianao nefa tsy nandihy. Izahay nitaraina, nefa tsy malahelo. '
11:18 Fa tonga Jaona tsy nihinana na nisotro; ka hoy izy ireo, 'Manana demonia izy.'
11:19 Ny Zanak'olona mihinana sy misotro kosa; ka hoy izy ireo, 'Indro, ny olona izay mihinana voraciously ary izay misotro divay, sakaizan'ny mpamory hetra sy ny mpanota. 'Fa ny fahendrena dia hamarinin ny zanany lahy. "
11:20 Avy eo dia niteny mafy ny tanàna izay maro ny fahagagana no tanteraka, fa mbola tsy nibebaka.
11:21 "Lozanareo, ry Korazina! Lozanareo, Betsaida! Fa raha ny fahagagana izay dia natao tany ianao no natao tany Tyro sy Sidona, dia ho efa nibebaka ela tamin'ny lamba fisaonana sy ny lavenona.
11:22 Na izany aza tena, Lazaiko aminareo, Tyro sy Sidona havela ny helony mihoatra noho ianao, amin'ny andro fitsarana.
11:23 Ary ianao, Kapernaomy, no hasandratra ny lalana rehetra any an-danitra? Ary hidina rehetra ny lalana mankany amin'ny helo. Fa raha ny fahagagana izay dia natao tany ianao no tany Sodoma no natao, angamba dia ho naharitra, mandraka androany.
11:24 Na izany aza tena, Lazaiko aminareo, fa ny tany Sodoma dia hahazo famelan-keloka bebe kokoa noho ianao, amin'ny andro fitsarana. "
11:25 Tamin'izany fotoana izany, Jesosy namaly ka nanao hoe:: "Izaho mahalala Anao, Ray, Tompon'ny lanitra sy ny tany, satria efa nafeninao tamin'ny hendry sy ny mahira-tsaina, ary, fa nahariharinao tamin'ny zaza amim-behivavy.
11:26 Eny, Ray, fa izany no ankasitrahana eo anatrehanao.
11:27 Ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny Raiko ahy. Ary tsy misy mahalala ny Zanaka afa-tsy ny Ray, sady tsy misy mahalala ny Ray afa-tsy ny Zanaka, sy izay tian'ny Zanaka hampiharihariana ny Ray Azy.
11:28 Come to me, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana efa, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana.
11:29 Ento ny ziogako, ka mianara amiko, fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po; ary ianao dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo.
11:30 Fa mamy ny ziogako, ary maivana ny entako. "